Olee otú Naghachi Lost Photos mgbe upgrading ka iOS 7
> Resource> iOS> Olee naghachi Lost Photos mgbe upgrading ka iOS 7/8/9
"Echefuola m niile photos!" Ọ na-eme ka ọtụtụ ndị mmadụ mgbe ha na-agbalị kwalite ha iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka ka iOS 7/8/9. Ime a ndabere maka iOS ngwaọrụ bụ ihe mbụ i kwesịrị ime tupu upgrading ya iOS 9/8/7. Ndị mmadụ maara nke a, ma ọtụtụ n'ime ha ichefu ya. Mgbe ọ na-eme, ha na-atụsi chọta ụzọ online-achọ inwere chọta a mfe ngwọta.
Bụ na e nwere n'ezie ngwọta dị otú ahụ? Ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ngwọta online ha nile na-ekwupụta na ha nwere ike kpamkpam naghachi gị niile foto ọbụna na-efu ruru iOS 9/8/7 mmelite. Iji a ruo n'ókè ụfọdụ, ha na-eme, ma ndị prekondishion bụ na ị na mgbe synced ngwaọrụ gị na iTunes na kọmputa gị n'ihu. Ọ bụrụ na ị na mgbe synced ngwaọrụ gị na iTunes, ọ bụ na o siri ike iji naghachi furu efu photos mgbe iOS 9/8/7 mmegolite, n'ihi na ihe niile usoro faịlụ na ngwaọrụ gị bụ ndị ọhụrụ ha, ha na iji overwrite niile furu efu data. Ya mere, nanị ụzọ iji weghachite furu efu photos mgbe emelite ka iOS 9/8/7 na-eweghachiri gị iPhone si iTunes ndabere.
Iweghachi ga-akwụsị nile dị na data na gị iPhone. Ọ bụrụ na ị na-achọghị ya, ị nwere ike họrọ iji a-atọ ndị ọzọ omume iji mezuo nke a n'ihi na gị, dị ka Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery for Mac) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery maka Windows). Ngwá ọrụ a pụrụ inyere gị aka wepụ iTunes ndabere, ka i nwee ike ihuchalu niile data na ya ma selectively naghachi ihe ọ bụla ị chọrọ. Ị nwere ike iji ya wepụ niile iTunes ndabere faịlụ gị iPhone, iPad na iPod aka.
Ọzọ, ka na-agbalị iji Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac). Ọ bụ ezigbo otu ihe ahụ ị na-eji Windows version. I nwekwara ike ile yiri iji wepụ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na gị Windows kọmputa.
Nzọụkwụ 1. Họrọ gị nkwado ndabere na mpaghara ike iṅomi ya
Wondershare Dr.Fone Maka iOS na-enye gị abụọ mgbake ụdịdị: naputa site na iOS ngwaọrụ na naputa site na iTunes ndabere faịlụ. Mgbe ị malite usoro ihe omume, ndabara mgbake mode bụ naputa site na iOS Ngwaọrụ. Ị mkpa ka ịgbanwee ya ndị ọzọ mgbake mode site na ịpị naputa site na iTunes ndabere File n'elu mmalite window. Niile wee iTunes ndabere faịlụ na kọmputa gị ga-akpaghị aka hụrụ na egosipụta n'ihu gị. Họrọ onye maka ngwaọrụ gị na pịa Malite iṅomi wepụ ya.
Nzọụkwụ 2. Naghachi photos furu efu gị iOS 9/8/7 iPhone / iPad / iPod aka
Ozugbo scanning na dechara, ị pụrụ nanị pịa Igwefoto Roll na Photo Stream na ekpe nke window. Mgbe ahụ, ị pụrụ ịhụ ọ bụla Foto dị na nri. Ịhụchalụ ha otu otu, na nne Mmetụta ihe na ị chọrọ. Ị nwere ike chebe ha niile na kọmputa gị na otu click na Naghachi bọtịnụ na ala-nri akuku.
Rịba ama: Ozugbo ị ghọta na i furu efu data na ngwaọrụ gị. Ihe mbụ i kwesịrị ime mgbe nile na-echebe gị ngwaọrụ site na a na-eji ọzọ, na adịghị agbalị ka mmekọrịta ya na iTunes tupu ị ga-esi gị data azụ.